नेपालको कीर्तिमानी जितका ३ नायक | Hamro Khelkud
नेपालको कीर्तिमानी जितका ३ नायक
एजेन्सी – नेपालले मलेसियासँगको दुई टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा ७ विकेटको सहज जित हात पारेको छ । दुई टी ट्वान्टी सिरिजमा १-० को अग्रता लिएको नेपालले दोस्रो तथा अन्तिम खेल आइतबार खेल खेल्ने छ ।
शनिवार किनारारा ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको मलेसियाले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय २८ रन बनाएको थियो । १ सय २९ रनको विजयी लक्ष्य नेपालले पारस खड्को उत्कृष्ट प्रर्दशनमा १८.३ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो । दोस्रो खेलमा विजयी भए नेपालले पहिलो पटक टी ट्वान्टी सिरिज क्लिन स्वीप गर्ने छ । टी ट्वान्टी आईमा नेपालको विकेटको हिसावले ७ विकेटको अन्तर सर्वाधिक ठूलो जित समेत हो । मलेसियामाथि कीर्तिमानी जित हात पार्न उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने ३ नेपाली खेलाडी :
३. वसन्त रेग्मी
टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएको मलेसियाका लागि ओपनर विरनदीप सिंहले राम्रो सुरुवात दिएका थिए । नेपाली बलरसामु उनी सुरुवात देखिनै खुलेर रन जोडेका थिए । सिंह नेपालका लागि घातक बन्दै गएका थिए । तर वसन्तले १५ औं ओभरको दोस्रो बलमा बाउन्ड्री लाइन नजिकै प्रदीप ऐरीबाट क्याच आउट गराउँदै ४९ बलमा ७ चौका र १ छक्का सहित ५७ रनमा पेभिलिएन फर्काए ।
क्रिजमा जमिसकेका उनी लामो समय क्रिजमा टिकेका नेपालको लागि घातक बन्न सक्थे । त्यस्तै वसन्तले १७ औं ओभरको तेस्रो बलमा शफिक सरिफलाई २ रनमा क्याच आउट गराएपछि मलेसियाको निरन्तर विकेट पतन भएको थियो । वसन्तले ४ ओभरमा २८ रन खर्चेर २ विकेट हात पारे । जसको कारण मलेसिया सस्तैमा समेटिएको थियो ।
२. करण केसी
अन्तिम ओभरमा हरेक ब्याट्सम्यान र टिम ठूलो रन बनाउन खोज्छन् । तर राम्रो सुरुवात गरेको मलेसियाको लागि करणले अन्तिम ओभरमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न दिएनन् । करणले अन्तिम ओभरमा ३ रन खर्चेर ३ ब्याट्सम्यानलाई पेभिलिएन फर्कापछि मलेसिया सस्तैमा समेटिएको थियो । करणले कसिलो बलिङ गर्दै ४ ओभरमा २७ रन खर्चेर ३ विकेट लिदै नेपालको सहज जित पक्का गरे ।
नेपालको सहज जितमा कप्तान पारस खड्काको प्रर्दशन महत्वपूर्ण बन्यो । कप्तान पारसले मलेसियामाथि सहज जित पक्का गर्न ८६ को उत्कृष्ट अविजित इनिङ खेले । पारसको यो दोस्रो टी ट्वान्टी आई अर्धशतक र टी ट्वान्टी करिअरको उच्च प्रर्दशन हो । नेपालबाट टी ट्वान्टी आईमा दोस्रो अर्ध शतक पुरा गर्ने पारस एक्लो ब्याट्सम्यान हुन् । टी ट्वान्टी आईमा नेपालबाट पारस बाहेक सन्दीप जोरा र सुवास खकुरेलले समान १ पटक अर्ध शतक पुरा गरेका छन् ।
सधैं निरास बनाउने ओपनिङ ब्याट्सम्यान आज पारसले भने उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे । पारसको उत्कृष्ट प्रर्दशनमा नेपालले ९ बल आगाडीनै लक्ष्य पुरा गर्यो । पारस सुरुवात देखीनै मलेसियाका ब्याट्सम्यान सामु खुलेर खेलेका थिए । ओपनर प्रदीप ऐरी ८, ज्ञानेन्द्र मल्ल ७ र रोहित कुमार पौडेल ५ रनमै आउट भएपनि पारसले नेपाली ब्याटिङलाई कुनै पनि समय धरमराउन दिएनन् । पारसले ठूलो इनिङ खेल्न नसकेको भए सामान्य लक्ष्य पनि नेपालको लागि घातक बन्न सक्थ्यो । नेपालको जितमा नायक बनेका पारस म्यान अफ द म्याच चुनिए ।